Mbido AKWINGKWỌ UKWUKA FOOTBALL Ndị egwuregwu bọọlụ Bekee Marc Guehi nwata akụkọ akụkọ gbasara eziokwu
Anyị Marc Guehi Biography na -agwa gị akụkọ gbasara akụkọ nwata ya, ndụ nwata, nne na nna, ezinụlọ, nwanne (nwanne), enyi nwanyị/nwunye ga -abụ, ụdị ndụ ya, ndụ onwe ya na ọnụ ahịa net, wdg.
Na nkenke, anyị na-egosi Akụkọ gbasara onye agbachitere na-eto ngwa ngwa, nwoke maara ihe ọ pụtara ịlaghachi azụ siri ike mgbe a jụrụ Chelsea. Akụkọ Marc Guehi na -amalite site na ụbọchị nwata ya na Abidjan (Ivory Coast) ruo mgbe ọ gaziri nke ọma.
Iji mee ka agụụ ịgụ akụkọ ndụ gị na -emetụta ọdịdị nke Football Bio ya, anyị lere anya na ọ dabara adaba ịkọwa mmalite ndụ ya na ebili osisi. Lee nchịkọta nke Marc Guehi's Life Journey.
Marc Guehi Biography - Lee ndụ nwata ya na akụkọ ịga nke ọma.
Ike na akara akara mmadụ na-eme Marc Guehi “ike nke okike”. Onye agbachitere dị ka Antonio Rudiger - onye nwere echiche siri ike na ike ịhapụ onye mkpọrọ ọ bụla. Ugbu a jụọ Raheem Sterling (onye a tara ahụhụ). Ọ ga -agwa gị gbasara Guehi.
N'agbanyeghị nkwanye ugwu gbara onye agbachitere bekee nke a mụrụ na Ivorian, anyị na-achọpụta na ọ bụ naanị mmadụ ole na ole gụrụ nkenke Marc Guehi's Biography. Anyị kwadebere ya maka gị. Ugbu a, n'atụghị egwu, ka anyị bido.
Akụkọ Marc Guehi Childhood:
Maka ndị na-amalite Biography, ọ nwere aha zuru oke-Addji Keaninkin Marc-Israel Guéhi. A mụrụ Marc Guehi n'ụbọchị 13th nke July 2000, n'obodo Abidjan, Ivory Coast.
Ọ bụrụ na ịmaghị, obodo ọmụmụ Guéhi - Abidjan - na Côte d'Ivoire bụ otu obodo Wilfried Zaha na Didier Drogba a mụrụ. Nwa nwoke ndịda ọwụwa anyanwụ London na otu n'ime ụmụaka anọ amụrụ site na njikọ alụmdi na nwunye dị n'etiti nne na nna ya.
Akụkọ na -eto eto:
Guehi nọrọ ọnwa 12 mbụ nke ndụ nwata ya na Côte d'Ivoire. Mgbe ụbọchị ọmụmụ mbụ ya, nne na nna ya kwetara ịhapụ Côte d'Ivoire maka England.
Mama na papa Marc Guehi chọrọ ndụ ọhụrụ - nke dị anya na Africa. Ha nwetara visa na United Kingdom. Na -erute ebe ahụ, ezinụlọ Marc Guehi biri na London Borough nke Lewisham - ebe ọ nọrọ oge ntorobịa ya niile.
Dị ka obere nwa nwoke London, ịhụnanya mbụ nke Marc Guehi abụghị ịgba bọl. Ọ na -atọ nwa okorobịa ahụ ụtọ ịkpọ ụbọ akwara ime obodo na chọọchị ezinụlọ ya. Dịka onye na -akụ ụka ụka, ọ naghị eji ụtụtụ Sunday eme ihe (oge ụka). Oge ndị ahụ bụ oge kacha nwee ọ andụ na nke kacha nwee obi ụtọ.
Azụ ezinụlọ Marc Guehi:
Onye egwuregwu bọọlụ England sitere n'ezinụlọ nwere okpukpe siri ike - ya na nne na nna ya na -etinye aka na ọrụ ụka. Dabere na The Athletic, nna Marc Guehi bụ pastọ. Nwoke ahụ rụrụ ụka ụka oge ochie - n'obodo Abidjan, Ivory Coast.
N'oge ahụ (dịka nke 2000), nne na nna Marc Guehi bụ ndị lụrụ di na nwunye - kwetara na ha agaghị azụlite ụmụ ha na Ivory Coast. kama, ha chọrọ ndụ ọhụrụ - nke dị anya na West Africa.
Ịbụ nwa onye ụkọchukwu na mba Afrịka ọ bụla ga -enwerịrị oke ụjọ. Nke mbụ, enwere ibu arọ ezinụlọ gị na -ebo gị. Mgbe ahụ, e nwekwara ibu dịịrị ọha mmadụ - nke na -ahụ na ị gaghị abụ onye isi ike.
Maka nna Guehi - ịbụ onye ụkọchukwu ụka ụka ya pụtara ichekwa okwukwe ụmụ ya.
Ọbụlagodi mgbe ha bi na London, nne na nna Marc Guehi kwusiri ike na ya, ya na ụmụnne ya, ga -elekwasị anya n'ihe abụọ. Nke mbụ n'ime ha bụ okpukpe, nke abụọ bụ ịgụ akwụkwọ nke ọma.
Ọzọkwa, gbasara ezinụlọ ya, onye egwuregwu bọọlụ England esighị n'ụlọ bara ọgaranya. Anyị matara nke a mgbe ya na ụlọ ọrụ mgbasa ozi egwuregwu kwurịtara okwu. N'okwu ya;
Enwetụbeghị m ụdị okomoko dị ịtụnanya mgbe m na -etolite.
Ugbu a, m lere anya n'ihe m ghọworo dịka ngọzi.
Ndị mụrụ m na ndị gbara m gburugburu na -agba mbọ hụ na m debere ụkwụ m n'ala, enwekwara m ekele maka nke ahụ.
Mmalite ezinụlọ Marc Guehi:
Ọtụtụ ndị egwu mara na o nwere Nationality Bekee n'ihi itinye aka ya na ndị ntorobịa England - ebe o meriri nnukwu.
N'eziokwu, ezinụlọ Marc Guehi nwere mgbọrọgwụ na Abidjan, isi obodo akụ na ụba nke Ivory Coast. Ọ bụ otu n'ime Akan, Voltaic ma ọ bụ Northern Mande Abidjan agbụrụ.
Nke a bụ Abidjan, ebe ezinụlọ Marc Guehi si.
Ivory Coast bụ ụlọ Africa Amara Diallo na kpakpando ndị ọzọ a ma ama. Ha gụnyere amasị nke Salomon Kalou (onye bụbu kpakpando Chelsea), Yaya Toure (akụkọ mgbe ochie obodo), Eric Bailly (Man United), na Serge Aurier (Ndị Spurs), Franck Kessié (AC Milan) na Nicolas Pepe (Arsenal).
Marc Guehi Mmụta na Nrụpụta Ọrụ:
Ná mmalite, naanị ihe nwata nwoke ahụ chọrọ bụ ịga ụlọ akwụkwọ ịgba bọọlụ. Ọchịchọ a megidere ọnọdụ nne ya na papa ya nwere. Dị ka ndị pastọ/minista ụka ụka ha, nne na nna Marc Guehi jigidere nguzo ha, nke bụ;
Okpukpe 100%, agụmakwụkwọ 100%, na 0% bọọlụ.
Nke bụ eziokwu bụ na ịga ụlọ akwụkwọ na ilekwasị anya n'okpukpe ya bụ ihe kacha mkpa n'ụlọ ya. Ndị nne na nna Marc Guehi achọghị ka ọ lekwasị anya na football. Kama nke ahụ, ha na -adụ ọdụ ka ọ gụchaa akwụkwọ - ọbụlagodi ọkwa Masters na Doctoral ya.
Dị ka akụkọ anyị si aga Ademola Lookman, Marc duhiere nne na nna ya n'okpuru aghụghọ - na ọ ga -agbaso ọchịchọ agụmakwụkwọ ha. Apụghị ịga akwụkwọ, Marc nwere egwuregwu bọọlụ ya na Cray Wanderers nke dabeere na Bromley.
Nwata ahụ malitere ịnata klaasị nkuzi bọọlụ - na isii. Na ihu ọma, onye nkuzi mbụ Marc Guehi bụ onye nlegharị anya Chelsea.
Na mbido, ọ dị mfe (a mbanye 12-nkeji) maka Guehi ka ọ na -ebufe n'etiti ụlọ ezinaụlọ ya na Lewisham ruo Bromley - ebe ọ gbara bọọlụ.
Ọzọkwa, ọ hụrụ na ọ dị nfe ijikọta bọọlụ na ụlọ akwụkwọ - nke o mere ihe niile n'aha nke imeju ndị mụrụ ya.
Ebe ọ na -egwu bọọlụ dị nso n'ụlọ ezinụlọ ya.
Akụkọ Marc Guehi Football:
Mmụta nọ n'ihu kwụ n'ahịrị, mana bọọlụ na -aga ka nwata ahụ na -etolite. Ị na -echeta onye nkuzi ya - onye na -agụ Chelsea?… Ọ bụ ya kpọgara Marc Guehi na Chelsea - iji mee ka ya na klọb nwee ule.
Ọ chọpụtara na nwata nwoke a bụ ọkaibe n'ịgbachitere. N'ihi ugwu Chelsea Football Club, ọ bụụrụ nne na nna Marc Guehi ihe siri ike ịsị mba. Nwa ha nwoke sonyeere mahadum Blues na asaa.
Ndụ na Chelsea Academy:
Guehi toro na agụmakwụkwọ Chelsea n'akụkụ ezigbo ndị enyi ya - Rhian Brewster na Conor Gallagher. Ụmụ nwoke niile - a na -akpọ ya Trios - so na kpakpando nwere ihu ọma ahọpụtara - mgbe ha gafesịrị ule Blues.
Nke a bụ Guehi - obere oge mgbe ọ sonyere na agụmakwụkwọ Chelsea. Chere obere… Ị chọpụtala Brewster?
Na mbụ, o siiri nne na nna Marc Guehi ịnakwere eziokwu ahụ - na nwa ha nwoke (nke e sere n'elu) ga -arara oge ntorobịa ya niile na bọọlụ karịa ihe ha chọburu.
Banyere enyemaka o nwetara site na Chelsea idozi uche nne na nna ya, Guehi gwara Athletic Media;
Echetara m ndị ọrụ sitere na agụmakwụkwọ Chelsea na -abịa n'ụlọ m iji mesie ndị mụrụ m obi ike na ihe niile ga -adị mma.
Ịgbaso agụụ a ga -atọ m ụtọ.
N'ime ụmụ akwụkwọ Chelsea niile dị ịtụnanya site na 2008, ihe dị ka itoolu n'ime ha ghọrọ ndị egwuregwu ịgba bọọlụ. Chere obere oge ... Ị chọpụtala Reece James na foto a?
Marc Guehi Biography - Ụzọ ama ama akụkọ:
Ruo afọ 15, nwata ahụ edoghị anya ma ọ ga -ebi ndụ na football. Agbanyeghị, ihe malitere ịgbanwe n'oge Marc, n'akụkụ ezigbo ndị enyi ya (Rhian Brewster na Conor Gallagher) meriri treble ahụ.
Mmeri ahụ masịrị klọb ahụ, onye ji ngọzi ọkachamara mbụ ya gọzie Guehi - na Septemba 2017. Site ugbu a, ihe niile Marc rọrọ - bụ i emomi. John Terry - otu arụsị ya.
Mgbe mbinye aka nkwekọrịta ahụ gasịrị, ihe bịara ka mma maka nwata ahụ. Ntọala agụmakwụkwọ Guehi nke Chelsea mere ihe ịtụnanya ka ha na -efegharị okpukpu anọ - gụnyere iko ndị ntorobịa FA na Premier League 2 - niile n'otu oge.
Marc Guéhi na ndị otu ya na -eme ememme mmeri ha.
Otu ụmụ nwoke Chelsea a abụghị naanị ime ka klọb ahụ sie ike. N'ezie, ha ghọrọ otu n'ime ndị ntorobịa kacha njọ na England niile.
Naanị ikekwe ị maghị… na setịpụrụ Chelsea enweghị ụkọ n'ọnọdụ niile. Ha nwere nnukwu kpakpando dịka Reece James (azụ azụ), Tariq Lamptey (azụ azụ), Billy Gilmour (etiti), Callum Hudson-Odoi (ọkpọ).
Marc Guehi Biography - Akụkọ ịga nke ọma:
Maka ndị na -amaghị, ọ bụghị naanị na ọkwa klọb ọ nwere ọmarịcha ịrị elu. Guehi nwere nsọpụrụ mba abụọ maka aha ya - iko mba ụwa FIFA na iko asọmpi UEFA.
Lelee asọmpi FIFA U-17 World Cup.
N'ịbụ onye a ghọtara dị ka ezigbo onye ndu, Guéhi bụ onye isi otu ndị otu England England na ngwụcha U17 European Championship ha. Ọ gbatakwara bọọlụ n'asọmpi Iko Mbaụwa - nke bịara ọnwa ole na ole ka e mesịrị.
Ndị nne na nna Marc Guehi ga -enwe nganga ịhụ nwa ha nwoke ka ọ na -ebi nrọ ndị o mere ka ha kwenye.
Ndụ na nnukwu ụmụ nwoke Chelsea:
Mgbe o mechara mba ya dị mpako na mba ụwa, Marc Guehi laghachiri Chelsea-na-enwe olileanya ịnweta ohere otu egwuregwu mbụ.
Na ọpụpụ nke Maurizio Sarri na mbata nke Frank Lampard, olileanya bịara maka ndị na -eto eto Chelsea.
Na benching nke Antonio Rudiger na Cesar Azpilicueta site na nhọrọ Chelsea nke mbụ, Frank Lampard lekwasịrị anya karịa na ụmụaka ya. Mmasị nke Egwuregwu Tomori na Reece James nwetara ohere ha. Kpakpando, dị ka Nathan Ake, bụ njupụta.
Guehi na -enye ohere ijikọ Kurt Zouma - nke gara nke ọma. Ọ nọ n'etiti ndị na -agbachitere ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ya Jesse Lingard ịla n'iyi - mgbe ị nọ n'ọrụ na -arụ ọrụ. Ekele niile maka nnukwu ọgụ ya.
Nke a bụ Marc Guehi na -ejikwa Jesse Lingard.
Ịga nke Ọma Swansea:
N'ikwu eziokwu, asọmpi kpụ ọkụ n'ọnụ n'etiti ndị na -agbachitere ndị okenye Chelsea kpatara enweghị oge egwuregwu kwesịrị ekwesị maka Marc Guehi. Dị ka ọtụtụ ndị na -eto eto nwere obi ike, ọ gafere - site na mbinye ego.
Ọ bụ na Jenụwarị 10, 2020 (ọnwa nke isii nke oge Lampard dịka onye njikwa Chelsea), Guéhi sonyeere Steve Cooper's Swansea City. N'ụzọ dị ịtụnanya, nye ndị na -akwado ya, ụlọ ọrụ Welsh were ndị Musketeers atọ - (Gallagher, Brewster, na Guehi) - niile n'otu oge.
Banyere njirimara ndị enyi ya - mgbe ọ nọ na Swansea, Guehi kwuru;
Abụ m onye tozuru etozu na onye nwere ọrụ.
Conor Gallagher bụ ogbugbu nkịtị.
Rhian Brewster bụ onye akpachapụghị anya - onye hụrụ n'anya ịfefe ebe niile. Ọ na -akpọ m mgbe ụfọdụ - "Papa m".
Mgbe ọ nọ na Wales, Guéhi lụrụ ọgụ iji nweta ọnọdụ ya - naanị n'ime ọkara oge. Ndị egwu na -akpọ ya dị ka - onye agbachitere kachasị lekwasịrị anya. N'ezie, enwere ịdị jụụ na mmesi obi ike gbasara egwuregwu egwuregwu ya.
Alaghachila na nkwụsịtụ COVID-19, Baller bidoro nke ọma n'oge ọzọ. N'ime oge 2020-21 ahụ, Guehi ghọrọ onye ama ama mgbe niile na nchekwa.
Otu ụbọchị, ọ nwetara nkwado mba mgbe o jisịrị ike ya mee ihe ike Raheem Sterling n'oge asọmpi iko FA.
Raheem Sterling gbara ọsọ ruo ihe mgbaru ọsọ ruo mgbe ọ zutere Guehi onye kpagburu ya n'ụdị WWE.
Na egwuregwu ahụ, onye ọ bụla hụrụ omume onye ndu na Marc Guéhi. Onye na -agbachitere ike ejideghị ndị mkpọrọ ụbọchị ahụ ka ọ na -emegbu Raheem Sterling - obi ọjọọ. Lelee vidio dị n'okpuru;
N'ihi egwuregwu ahụ na arụmọrụ ya ndị ọzọ, a matara Guéhi dị ka otu n'ime onyinye EPL na -enwu enwu. O nyeere Swansea aka ịrịgo n'elu tebụl-yana njedebe EFL nke anọ yana ọnụ ọgụgụ 17 dị ọcha n'aha ya.
Mwakpo Crystal Palace:
Mgbe ngwụcha oge EFL 2020/2021, Guéhi nwere ike chee na ọdịnihu ya kpọrọ ya na Premier League. N'ụbọchị iri na asatọ nke ọnwa Julaị 18, akụkọ - Crystal Palace bịanyere aka n'akwụkwọ Marc Guehi na nkwekọrịta afọ ise jupụtara na ntị onye ọ bụla na -akwado Chelsea.
The Baller ghọrọ onye mbụ ewepụtara oge ọrụ Patrick Vieira na ndị Eagles. Lee oge onye na -agbachitere elu na -esonye na Premier League.
Site n'itinye mkpịsị akwụkwọ n'akwụkwọ, Marc Guéhi ghọrọ onye bịanyere aka na Crystal Palace kachasị ọnụ - naanị n'azụ Mamadou Sakho na Christian Benteke. Kemgbe isonyere klọb ahụ, ọtụtụ ndị egwuregwu bọọlụ ajụọla;
Ndi Chelsea mehiere?…
N'ezie m na -ekwu, ndị na -akwado bọọlụ na -achọ ịhụ ụdị ọzọ Dayot Upamecano (Superstar French) na -agbasi mbọ ike ka ọ bụrụ onye na -asọ mpi maka Onye agbachitere kacha mma nke ọgbọ ya.
Echefula, Guehi bụ naanị 21 (n'oge edere Bio). Isi mmalite nke ihe ịga nke ọma ya taa bụ ihe nketa nke awa ndị a na -eme ọzụzụ n'ime ụlọ na Cobham nke Chelsea.
N'oge ịmepụta Marc Guehi Biography, ihe nwata nwoke ahụ chọrọ bụ ka ọ nweta ọtụtụ egwuregwu n'okpuru eriri ya, nweta ahụmịhe, wee merie (isi ihe). Ndị ọzọ, dị ka Lifebogger kwuru, bụ akụkọ ugbu a.
Onye bụ Marc Guehi na -eme enyi?… Nwanyị nwanyị, Nwunye, Nwa?
Inwe ike ịchọta ịhụnanya ma bụrụkwa onye egwuregwu bọọlụ na -aga nke ọma bụ mmetụta kacha mma. Enweghị mgbagha, Marc Guehi mara mma. Ịdị mma ya nwere ike ịdọrọ ụmụ nwanyị ga -eme ihe ọ bụla iji bụrụ enyi nwanyị, nwunye, ma ọ bụ nne nke ụmụ ya (Baby Mama).
Kedu onye Marc Guehi na -eme enyi?
N'oge edere Marc Guehi Biography (10th nke Ọgọst 2021), ọ ka ga -eme ka mmekọrịta ya n'ihu ọha. Eleghi anya, ọ ga -abụrịrị na ndị mụrụ ya dụrụ ya ọdụ ka ọ ghara ịlụ nwanyị - opekata mpe ugbu a.
Apụghị n'egwuregwu bọọlụ, onye bụ Marc Guehi? Akụkụ a nke Bio anyị ga -enyere gị aka ịghọta ya nke ọma. Ihe mbu mbu, Marc Guehi tozuru oke maka afọ ndụ ya. N'ihi ntozu oke ya, ị nwere ike chefuo na ọ dị naanị afọ 21 - N'oge edere akụkọ ndụ ya.
Nke na -adọrọ mmasị karị, onye England na onye agbachitere Ivorian kwenyere na Santa Claus. N'ezie, Guehi nwere mmasị iyi uwe dị ka otu. Ya na nwoke Crystal Palace adịghị enwe ọmarịcha ekeresimesi - onye bụ Santa Claus nke ụka nna ya.
Nke abụọ, ọ hụrụ mgbatị ahụ pụrụ iche n'anya - na -eji igwe kwụ otu ebe n'okpuru anyanwụ. Nke a na -enye ahụ Marc, Vitamin D Dose.
Ndụ ndụ Marc Guehi:
Nke mbụ, ọ BỤGHỊ ụdị onye na -anya isi nke ukwuu. Guehi abụghịkwa onye na-eji mgbasa ozi mmekọrịta ya na-ekwu okwu afọ ojuju maka etu bọọlụ bara ọgaranya siri mee ya.
Ndụ ndụ Marc Guehi - Ọ bụ ọgwụ mgbochi ibi ndụ dị oke ọnụ.
Nwa nwoke ahụ na -ezere akwụkwọ akụkọ ndị na -egbu maramara - ọ bụkwa ọgwụ mgbochi igosi ụgbọ ala, nnukwu ụlọ, wdg.
Ndụ Marc Marc Guehi:
Ha na -agba ya ume ma kwerekwa na ya. Nke a bụ ihe na -enye Marc Guehi ike imeri dragons. Na ngalaba a, anyị ga -amụkwuru nne na nna ya na ndị ezinụlọ ya.
Banyere Marc Guehi Nna:
Nke mbụ, ọ na -eme ememme ụbọchị ọmụmụ ya kwa ụbọchị 28th nke Ọktọba. Pastọ Addji Keaninkin Guehi bụ onye ụkọchukwu na -elekọta ụka Ndị Kraịst. Ọ malitere ọgbakọ ya laa azụ na Abidjan, isi obodo Côte d'Ivoire.
Nne Marc Guehi:
Dịka di ya, Oriakụ Addji Keaninkin bụkwa onye ụkọchukwu ụka. Nne Guehi malitekwara ịrụ ọrụ ọgbakọ - laa azụ na Abidjan, isi obodo Côte d'Ivoire. Ọ na -enwe oke nganga n'ihe nwa ya nwoke nwetarala n'egwuregwu bọọlụ.
Marc Guehi ụmụnne:
N'ajụjụ ọnụ, ọ kpughere otu ihe banyere nwanne ya nwanyị The Athletic Media Company. Nke a bụ mgbe ahụ Guehi tụlere akara na njedebe nke FIFA U-17 World Cup. N'okwu ya;
Nwanne m nwanyị kpọrọ m ụbọchị tupu asọmpi a. Ọ gwara m na m ga -akara.
Ọ dị mma, amụma nke nwanne nwanyị Marc Guehi buru mezuru. Na FIFA U-17 World Cup ikpeazụ, o meriri ihe mgbaru ọsọ. Ọ dabara na ezinụlọ Marc Guehi, ụbọchị ahụ bụ ụbọchị ọmụmụ nna ya. Site na ntinye, ọ pụtara akara aka!
Eziokwu Marc Guehi:
N'ebe a na akụkọ ndụ anyị, anyị ga -eji ngalaba a kọọkwuo eziokwu gbasara onye na -agbachitere Crystal Palace. N'atụghị egwu ọzọ, ka anyị bido.
Eziokwu # 1 - Mmebi ụgwọ ọnwa nke Marc Guehi:
Ụgwọ ọnwa ya, mgbe ọ hapụrụ Swansea, dị ihe dịka € 24K. Ugbu a na Crystal Palace, onye na -agbachitere Ike na -enweta ihe dị ka paụnd 30,000 kwa izu. Nke a bụ ndakpọ ụgwọ ọnwa Marc Guehi.
Nweta Marc Guéhi (£)
Kwa Afọ: £ 1,562,400
Ọnwa kwa: £ 130,200
Kwa Izu: £ 30,000
Kwa :bọchị: £ 4,285
Kwa elekere: £ 178
Nkeji nkeji: £ 2.9
Kwa Nke Abụọ: £ 0.05
Kemgbe ị bidoro ilele Marc Guehi'Bio, nke a bụ ihe o ritere na Palace.
Eziokwu # 2 - Marc Guehi Profaịlụ:
Dịka e kwuru n'elu, nwata ahụ na -eme nke ọma n'ike, ije, echiche na ịgbachitere. Eleghi anya, Guehi gaara abụ onye zuru oke iji dochie ya Thiago Silva na Cesar Azpilicueta.
Eziokwu # 3 - Okpukpe Marc Guehi:
Ụzọ ndụ Iso Ụzọ Kraịst dị ya mkpa dị ka ọ dị n'oge ahụ - n'oge ọ bụ nwata.
Marc Guehi etolitela na -ahụ Chineke n'anya na mgbe onye egwuregwu bọọlụ nwere ohere, ya na ezinụlọ m ka na -aga ụka. Okwukwe Iso Ụzọ Kraịst ka bụ nnukwu akụkụ nke ezinụlọ ya na ndụ ya.
Tebụl Wiki dị n'okpuru na -ekpughe ozi dị nkenke gbasara Marc Guehi.
Aha n'uju: Addji Keaninkin Marc-Israel Guéhi
Ụbọchị ọmụmụ: 13 July 2000
Age: 21 afọ na ọnwa 3.
Ndị nne na nna: Mr na Oriakụ Addji Keaninkin Guéhi
Ebe ezinụlọ si: Abidjan, Ivory Coast
Ọrụ ndị nna: Onye ọzụzụ atụrụ
elu: 1.82 mita ma ọ bụ 6 ụkwụ 0 sentimita asatọ
Ezigbo Net: £ 500,000 (stats 2021)
Onye nnọchite anya: Njikwa Egwuregwu Pụrụ Iche
Education: Cray Wanderers, Mahadum Chelsea
Ụlọ akwụkwọ agụmakwụkwọ Chelsea na -emepụta Wonderkids, imirikiti ndị na -eme nke ọma ebe ọzọ. Mmasị Fikayo Tomori, Marc Guehi, na Tammy Abraham bụ atụ atụ.
N'agbanyeghị ọtụtụ talent na -apụta na agụmakwụkwọ ha, ndị mmadụ ka na -eche ihe kpatara na Bad ka na -ahọrọ ire ha wee na -eso kpakpando mba ụwa dị ka nke Inter Milan. Romelu Lukaku na Sevilla Jules Kounde.
Mgbe ọ bụ nwata, o tinyere aka na okwukwe Iso Ụzọ Kraịst nke ezinụlọ ya. N'ihi ya, ọ bụ karịa ịbụ nwa nwoke ụka na ịgbaso nkuzi okpukpe nke nne na nna ya wetaara ya. Egwuregwu bọọlụ adịtụghị na nha, dịka nne na nna Marc Guehi họọrọ agụmakwụkwọ.
Taa, Onye agbachitere ka bụ onye nlereanya, nke mbụ n'okwukwe okpukpe ya (ihe ọ mụtara n'aka nne na nna ya). Nke abụọ, n'egwuregwu bọọlụ. N'ezie, amara Chineke na ebube Chineke esorola Marc Guehi - site na ndụ ya.
Ezigbo ndị egwu, anyị nwere ekele maka gị - maka iwepụta oge gụọ Akụkọ Akụkọ ndụ anyị gbasara ya Ndị egwuregwu bọọlụ si United Kingdom. Jiri nwayọ mee ka anyị mara ma ọ bụrụ na ịchọta ihe na -adịghị mma na ihe ncheta a. Ọ ga -akara gị mma ikwu echiche gị banyere Guehi?